धरै तनाव लिँदा आँखालाई कस्तो असर पार्छ? कसरी बच्ने ? « Pen Nepal
धरै तनाव लिँदा आँखालाई कस्तो असर पार्छ? कसरी बच्ने ?
Published On : 27 August, 2020 4:16 pm By : पेननेपाल
काठमाडौं । पछिल्लो समय म तनाव मुक्त छु भन्ने मानिस भेट्न मुस्किल जस्तै भएको छ । त्यसमाथि पनि (कोभिट १९) कारोना भाइरसका कारण घरमै बस्नु पर्ने र काम नहुँदा तनाव वा मानसिक समस्यामा छन् ।
यदि तपाईं पनि बढी तनावमा रहनुहुन्छ भने तपाईंको आँखा कमजोर हुने अत्यधिक सम्भावना छ । जर्मनीको मैग्डेबर्ग आटो वाँन गुरिके युनिभर्सिटीको अध्ययनले निरन्तर तनाव लिँदा अटोनोमिक नर्भस सिस्टमको असन्तुलनका कारण आँखा र मस्तिष्कमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।
१ मद्यपान तथा सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन नगर्नुहोस् वा कम गर्नुहोस् । यसको सेवनले तपाईंलाई उत्तेजित बनाउनुका साथै तनावको स्तर बढाउन मद्दत गर्छ ।
२ दैनिक साधारणतया ३० मिनेट व्यायाम गर्नुहोस् । यसले तपाईंलाई फिट राख्नुका साथै तनाव पनि कम गराउँछ ।
३ स्वस्थ खानेकुरा तथा फलफूल, ताजा तरकारीको सेवन गर्नुहोस् । फलमा उपलब्ध हुने एन्टिअक्सिडेन्टले शरीरलाई स्वस्थ राख्छ ।
४ कमसेकम दैनिक ७–८ घण्टा सुत्ने गर्नुहोस् । यसबाट तनावमा केही कमी आउँछ ।
५ समय राम्रोसँग निर्धारण गर्नुहोस् । धेरै काम आफ्नो भागमा मात्र नलिनुहोस्, दोस्रो व्यक्तिका लागि पनि दिनुहोस् । कुनै समय आराम पनि लिने गर्नुहोस् । यसले तनावलाई केही हदसम्म घटाउँछ ।